‘दिल्ली–बैंग्लोरको हवाई यात्रामा पाँच वर्षे बालकको एकल यात्रा’
scheduleसोमवार आषाढ़ २९ गते, २०७७
बैङ्लोर, १३ जेठ । सोमबारदेखि आन्तरिक उडान सुरु गरेको भारतमा उडानमार्फत विभिन्न गन्तब्य जाने यात्रुहरूको सङ्ख्या ५८ हजार ३१८ पुगेको भारतीय उड्ययन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सोमबार देशका विभिन्न स्थानबाट कूल ८३२ उडान गरिएको थियो ।
सोमबारका उडानहरूमध्ये एउटा यस्तो उडान भएको छ जसमा एक पाँच वर्षका बालकले एकल हवाई यात्रा गरेका छन् ।
तीन महिनादेखि दिल्लीमा फसेका पाँच बर्षीय बालक बिहान शर्माका लागि सोमबार दिल्ली–बैंग्लोरको यात्रा आफ्नी आमासँग भेट गर्ने अनौठो संयोग बनेको हो । परिवारबाट टाढा रहेका शर्मा दिल्लीमा आफन्तकहाँ बस्दै आएका थिए ।
बैंग्लोरमा शर्माकी आमाले उनलाई रिसिभ गरेकी थिइन् । सोमबार जब विहान बैंग्लोर एयरपोर्टमा पुग्दा उनकी आमा छोराको प्रतिक्षा गरिरहेकी थिइन् । उनले एएनआईसँग कुरा गर्दै छोरा दिल्लीबाट आएको जहाजमा एक्लै आएका विमानका कर्मचारीले आफुलाई बताएको जानकारी गराइन् ।
एएनआईले एकल यात्रा गर्ने ती बालकको हातमा विशेष श्रेणीको कार्ड बोकेको तस्वीरलाई सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहान शर्मा केही दिनको छुट्टीमा दिल्लीमा रहेका आफ्ना हजुरबुवा र हजुरआमालाई भेट्न गएका समय लकडाउन भएपछि उनी तीन महिनासम्म आफ्नो काखबाट टाढा रहेको उनकी आमाले बताइन् । एएनआई
कजाकिस्तानमा कोरोनाभन्दा खतरनाक भाइरस भेटियोः चीन
राष्ट्रिय जिम्मेवारी निभाउन दोस्रोपटक पनि विवाह स्थगित गरिन् यी प्रधानमन्त्रीले
यस्तो पनि, विश्व
पाकिस्तानका प्रत्येक तीनमध्ये एक पाइलट बोक्छन् नक्कली लाइसेन्स
महामारीमा मेसीको जन्मदिन मनाउने बढेपछि सरकारलाई समस्या …
जहाँ कोरोना परीक्षण गर्न सरकार घरघर पुग्दैछ …
के तपाईलाई थाहा छ प्रशान्त महासागरबारे यी रोचक तथ्यहरु
महामारीमा पनि भेदभाव, मुस्लिम समुदायको आपत्ति
रेड गोल्डः विश्वकै महंगो मसला, प्रति किलो मूल्य कति ?
डेनमार्कमा कुकुरमा कोरोना भेटियो, पशुहरु परीक्षणमा
अनलाइन क्लासमा नयाँ जुक्ति निकाल्ने यी शिक्षिका भइन् भाइरल
मुख्य समाचार, यस्तो पनि, राजनीति
बजेटको विरोधमा संसदमै मौनधारण (भिडियोसहित)
कोभिड–१९ को उपचारको बिल ११ लाख डलर अर्थात् झण्डै १४ करोड
ट्रम्पबारे नरम भएको भन्दै मालिकलाई प्रश्न गर्ने फेसबुकका कर्मचारीको जागिर गयो
कोरोना भाइरसका कारण जब प्रधानमन्त्री जेसिण्डाले क्याफेमा टेबल पाइनन् …
पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमाथि यौन उत्पीडनको आरोप
अर्थ / व्यापार, यस्तो पनि
जहाँ कोरोना महामारीमा पनि देशको आर्थिक वृद्धिदर ५१ प्रतिशत हुनेछ, यस्तो छ कारण
जहाँ दुई महासागर भेटेर पनि किन मिसिदैँनन्, यस्तो छ रहस्य
ट्रम्पकी छोरी टिफानी पनि बाबुको विरोधमा उत्रिएपछि …
सुगा उडाएको निहूँमा आठ वर्षीया बालिकाको हत्या
कोरोनालाई पत्नीसँग तुलना गरेपछि विवादमा तानिए मन्त्री
कोरोना कहरः एउटै प्रदेशमा कम्तिमा ३० हजार विवाह स्थगित
उपत्यकामा ९ जनामा संक्रमण पुष्टि
काठमाडाैं, २९ असार । सोमबार काठमाडौं उपत्यकामा ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनासंख्या मन्त्रालयका...
बच्चन परिवारसँग कन्ट्याकमा आएका ५८ जनाको कोरोना परीक्षण
काठमाडौँ, २९ असार । बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनको परिवारका चार जना सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भएपछि उनीहरुसँग कन्ट्याकमा रहेका...
भारतले सांस्कृतिक तथ्यमाथि अतिक्रमण गरेको छ: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडाै‍ं, २९ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले ‘नक्कली अयोध्या’ खडा गरेर सांस्कृतिक तथ्यमाथि अतिक्रमण गरेको...
अरिङ्गाललाई जिउँदै जलाउन मौरीहरु यसरी समूहमा काम गर्छन्
एजेन्सी, २९ असार । अरिङ्गालहरु घातक हुन्छन् । यस्ता अरिङ्गाललाई माहुरीले कसरी जित्लान् ? सबैमा जिज्ञासा हुनु स्वभाविक हो...
प्रसारणमा रोक लगाएका केही भारतीय च्यानल चल्ने
काठमाडौं, २९ असार । भारतीय चारवटा न्यूज च्यानलहरुको प्रसारणलाई कायम राखेर अन्य च्यानलहरुको प्रसारणमा प्रतिबन्धलाई निरन्तरता...
खसीबजार चोक नजिकै एक जना मृत फेला
काठमाडौँ, २९ असार । पोखरा महानगरपालिका १४ चाउथे स्थित खसीबजार चोक नजिकै एक जना मृत फेला परेका छन् । चितवन भरतपुर महानगरपालिका...
अभिनेत्री दिव्या चौकसेको २९ वर्षको उमेरमा निधन
एजेन्सी, २९ असार । बलिउडको लागि सन् २०२० काल सावित भईरहेको छन् । फिल्म उद्योगसँग जोडिएका विभिन्न हस्तीहरु गुमाएको बलिउडले...
अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीद्वारा सुधार कार्यक्रमको घोषणा
एजेन्सी, २९ असार । चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर महामारीपछिको अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न...